Apple ndiyo huru Google gore rekuchengetedza chikuva mutengi | Ndinobva mac
Mumakore achangopfuura, Apple yakavaka nhamba hombe yedata nzvimbo, data nzvimbo dzinoshandiswa kutsigira masevhisi ayo (tsamba, iCloud, Apple Music, Apple TV + ...) asi ayo anoshandiswa zvakare kupa nzvimbo kune vatengi vako kuburikidza iCloud.
Hatizive kana nzvimbo dzedata dzakakundikana nekukurumidza kana kana Apple ichida kuburitsa kune mamwe makambani kuchengeta imwe data, asi chokwadi ndechekuti vanoti Iyo infomation, Apple inobhadhara madhora mazana matatu emadhora kuti ishandise gore reGoogle.
MunaNovember 2020, Apple yakabata nezve mazana mazana mana nemakumi mana emabheyeti edata, ichiunza huwandu hwese hwedata rakabvumiranwa naApple kubva kuGoogle kuenda ku470 exabytes. Kujekesa: 8 exabyte yakaenzana nemiriyoni imwe TB, 1 bhiriyoni GB ...
Chokwadi chinoda kuziva: exabyte yaive yakaenzana ne2o nguva mabhuku ese akanyorwa munhoroondo kusvika 2013. Zvingangodaro, mukati memakore mashoma, exabytes icharamba iri diki uye kumakambani makuru uye mazita zettabyte uye yottabyte anotanga kuve akajairika.
Zvinoenderana nesvikiro rakafanana, Apple rave iro rakakura mutengi weGoogle yekuchengetedza sevhisi, uye vakatomboipa zita remadunhurirwa rekuti: Bigfoot. Apple yanga ichishandisa masevhisi eGoogle kubva 2018.
Zvinoita pasina kutaura kuti makiyi ekuvharira zviri pachena kuti haasi muGoogle, saka vadikani verangano havana chikonzero chekukahadzika kana Google ichigona kuwana data iro vatengi kana Apple pacharo rinochengeta pamaseva avo.
Mutengi wechipiri weGoogle gore rekuchengetera chikuva ndeyeTikTok, ine vangangoita mazana mashanu petabyte chibvumirano, chiyero chakafanana chekuchengetwa kwakabvumiranwa naApple munaNovember apfuura kuti iwedzere nzvimbo yekuchengetera kune ikozvino 500 exabytes.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple ndiyo mutengi mukuru pane yeGoogle gore rekuchengetedza chikuva